जाडो कति महसुस हुदैछ ? काठमाडौँको आजको तापक्रम शून्य डिग्री | Lumbini Aawaz
जाडो कति महसुस हुदैछ ? काठमाडौँको आजको तापक्रम शून्य डिग्री
काठमाडौँ, पुस २३ (एजेन्सी): काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम शून्य डिग्रीमा झरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज यस वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ । उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । तराई क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सुले जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
काठमाडौँको आजको न्यूनतम तापक्रम ० र बिहान ११ बजेको तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि पुुस २० देखि २२ गतेसम्म निरन्तर काठमाडौँको तापक्रम १ डिग्रीको हाराहारीमा पुगेको थियो ।
उपत्यकाको तापक्रम अझै एक दुई दिन स्थिर (शून्य डिग्री) रहने मौसमविद् शान्ति कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आज पनि तराई क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु लागेको छ । चिसो अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कम जुम्लामा आज ऋणात्मक ८ दशमलव ७ तथा सबैभन्दा बढी विराटनगर र नेपालगञ्जमा ८–८ डिग्री सेल्सियस छ ।
उत्तर पश्चिमी वायुले चिसो बढ्यो पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज मुलुकभर वर्षाको प्रभाव छिटफुट वर्षा र हिमपातको सम्भावना जाडो कति हुदैछ ? काठमाडौंमा अझै चिसो बढ्ने काठमाडौँ उपत्यकामा हल्का वर्षा काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २.३ डिग्री सेल्सियस चिसोका कारण भरतपुर–काठमाडौँ र पोखरा उडान रद्ध जाडो बढेपछि मोरङमा पाँच दिन विद्यालय बन्द सन् १९३९ पछि सिड्नीमा सबैभन्दा गर्मी